အေမာမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အေမာမ် ခေါ် သာသနာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ရှီအာမွတ်စ္စလင်မ်တို့၏ ‎အဓိကယုံကြည်ချက်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ရှီအာတို့ကို ရှီအာအက်စ်နာအက်ရှ်ရီယာ ဆိုလိုသည်မှာ ‎တစ်ဆယ်နှစ်ပါးအေမာမ်များကို ယုံကြည်နောက်လိုက်သူဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြလေသည်။ အေမာမ်ဆိုသည်မှာ ‎ခေါင်းဆောင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ မည်သည့်မျိုးနွယ်စုမှ ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲ တစ်ခါဏတာမျှပင် ‎ရပ်တည်နေထိုင်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
ရှီအာတို့၏ အဓိကအခြေခံယုံကြည်ချက်များမှာ တစ်ဆူအရှင်ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ တမန်တော်များကို ‎ယုံကြည်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးနေ့တွင် ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမည့် တရားစီရင်မည့်နေ့ မအားဒ် ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ ‎တရားမျှတခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း၊ အေမာမ်များကို ယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ရှီအာတို့သည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် ဟဒီးစ်ဩဝါဒတော်တို့ကို လေ့လာသုံးသပ် ကိုးကား၍ ‎သာသနာတော်အတွက် နောက်ဆုံးတမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) မရှိသည့်နောက်တွင် ‎သာသနာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လိုအပ်ကြောင်း ယုံကြည်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
စူရာဟ် စဂျ်ဒါဟ် အာယတ်အမှတ် ၂၄ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားလေသည်။
وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ. ‏ ဗနီအစ္စ်ရာအီလ်မျိုးနွယ်စုတို့အကြား လူသားတို့အား လမ်းမှန်သို့ ညွှန်ပြနိုင်ရန် ငါအရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ဖြင့် ‎ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား သတ်မှတ်တော်မူခဲ့၏။ ၎င်းတို့သည် ခန္ဒီသည်းခံခြင်းတရားကိုလက်ကိုင်ထားသည့်အပြင် ‎ငါအရှင်မြတ်၏ အာယသ်တော်များအပေါ်လည်း ယုံကြည်ကြလေသည်။ ဤအာယသ်တော်သည် အေမာမ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရာတွင် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်၏ ‎ထံမှသာဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေသာဓကပြုလေသည်။ 
စူရာဟ် ဘကရာ အာယသ်အမှတ် ၁၂၄ တွင် မိန့်တော်မူထားသည်မှာ
و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی ‏الظالمین". ‏ ‎(ပြန်လည်အမှတ်ရကြလေကုန်) အရှင်မြတ်သည် အီဗရာဟင်မ်အား အကြောင်းခံမျိုးစုံတို့ဖြင့် စမ်းသပ်တော်မူခဲ့၏။ ‎၎င်းသည် ထိုစမ်းသပ်မှုတို့အပေါ် အောင်မြင်ခဲ့၏။ အရှင်မြတ်မှ မိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာ ငါအရှင်မြတ်သည် ‎အသင့်အား လူသားတို့အတွက် အေမာမ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်တော်မူ၏။ အီဗရာဟင်မ်မှ ပြောခဲ့သည်မှာ ‎ကျွန်တော်မျိုး၏ အနွယ်တော်မွန်အားလည်း ထိုအရိုက်အရာအား ပေးတော်မူမည်လော။ အရှင်မြတ်မှ ‎မိန့်တော်မူသည်မှာ ငါအရှင်မြတ်သည် မည်သည့်အခါမှ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းသူတို့အား ထိုအရိုက်အရာကို ‎ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ‎ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သာလျှင် အေမာမ်ခေါင်းဆောင်များကို ခန့်အပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ‎ထိုအေမာမ်ခေါင်းဆောင်များသည်လည်း အပြစ်ဒုစရိုက်တို့မှ ကင်းစင်သူများ ဖြစ်ကြောင်း စသည်တို့ကို ဖော်ပြပါ ‎အာယသ်တော်သည် သက်သေသာဓကဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြနေသည်။ ‎
ဆွဟီးဗိုခါရီကျမ်း၊ ဆွဟီးမွတ်စ္စလင်မ်ကျမ်း၊ မွတ်စ်နဒ်သွယာလိစီးကျမ်း၊ အဟ်မဒ်အိဗ်နေဟမ်ဘလ်ကျမ်း၊ ‎စိုနန်သိလ်မီဇီကျမ်း၊ အိဗ်နေမာဂျာကျမ်းနှင့် တစ်ခြားသောကျမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ‎တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် ဟဇရသ်အလီ(အ.စ)အား မိန့်တော်မူလေသည်။ အိုအလီ အသင်သည် ‎ငါကိုယ်တော်မြတ်နှင့် ပတ်သက်မှုသည် မူစာနဗီနှင့် ဟာရွန်တို့၏ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ‎ကွာခြားသည်မှာ ငါကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနောက် မည်သည့်နဗီတမန်တော်မှ ပွင့်ပေါ်တော့မည်မဟုတ်ပေ။
တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ နောက်ဆုံးဟဂျ်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည့် ဟစ်ဂျရီခုနှစ် (၁၀)၊ ဇီလ်ဟဂျ်လ ‎‎(၁၈)ရက်နေ့အပြန်တွင် စူရာဟ်မာအေဒဟ် အာယသ်အမှတ်(၆၇)သည် ကျရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုနောက် ‎တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် မိမိတို့၏ အဖွဲ့များအား ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ အရှေ့မှ အလျှင်ထွက်သွားကြသော ‎အဖွဲ့များကို ပြန်လည်၍ နောက်သို့လှည့်လာရန် ခိုင်းစေခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင် အနောက်မှ လာနေကြသော ‎အဖွဲ့များကိုလည်း စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည်။. ထိုနေရာတွင် နမားဇ်ဖတ်ပြီးနောက် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ကို ‎ချီးမွန်းထောမနာပြီးနောက် မိန့်ခွန်းတော်ကို မိန့်ခြွေခဲ့လေသည်။ ငါကိုယ်တော်မြတ်သည် များမကြာမီတွင် ‎အသင်တို့ထံမှ နောင်တမလွန်သို့ သွားရန် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ထံမှ ဖိတ်ခေါ်သံကြားရလေသည်။ ‎ငါကိုယ်တော်မြတ်သည်လည်း ထိုဖိတ်ခေါ်မှုကို လက်ခံလိုက်လေပြီ။ ငါကိုယ်တော်မြတ်နည်းတူ အင်တို့သည်လည်း ‎ထိုတမလွန်ခရီးသို့ ဆက်ကြရန် တာဝန်ကိုယ်စီလည်း ရှိကြသည်။ …… ငါကိုယ်တော်မြတ်သည် အသင်တို့ ‎သူတော်စင်တို့အကြား ပို၍ မြင့်မြတ်ကြောင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်ဦးစီးဖြစ်ကြောင်းကို သိကြပါသလား။ လူထုကြီးမှ ‎ဟစ်အော်၍ ထိုသို့ဖြစ်ကြောင်းကို သိပါဟု ဖြေကြလေသည်။ ထိုနောက် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ‎ဟဇရသ်အလီ(အ.စ)၏ လက်ကိုကိုင်မြောက်၍ မိန့်တော်မူသည်မှာ အိုလူသားများ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် ‎ငါကိုယ်တော်၏ အရှင်သခင်ဖြစ်၏။ ငါကိုယ်တော်သည် အသင်တို့၏ ဦးဆောင်ဦးသျှောင်ဖြစ်သည်။ ‎ငါကိုယ်တော်မြတ်ကို မည်သူမဆို ဦးဆောင်ဦးသျှောင်ဟု သတ်မှတ်ပါလျှင် အလီသည်လည်း ‎ထိုသူ၏ဦးဆောင်ဦးသျှောင်ပင်ဖြစ်၏။.  ထိုနောက် လက်နှစ်ဖက်ကိုမြောက်၍ ဒိုအာတောင်းလေသည်။ ‎အိုအလ္လာဟိုအရှင်မြတ် သူ့အားနှစ်သက်သူကို အရှင်မြတ်နှစ်သက်တော်မူပါ။ သူ့အားရန်ငြိုးပြုသူကို ‎အမြတ်တော်စူးရှစေပါ။ သူ့အားကူညီးဖေးမသူကို ကူညီဖေးမတော်မူပါ။ သူ့အားစိတ်ပျက်အောင်ပြုသူကို ‎စိတ်ပျက်အောင်ပြုတော်မူပါ။ ဟုတောင်းဆုပြုခဲ့လေသည်။ 
တစ်ခြားသော ဟဒီးစ်ဩဝါတော်တွင် မိန့်တော်မူထားသည်မှာ ‎ ‎ ‎‏«من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتة جاهلیّة» ‏ အကယ်၍ မည်သူမဆို မိမိခေတ်ကာလ အေမာမ်ခေါင်းဆောင်ကို မသိခဲ့ပါလျှင် အသိညဏ်ကင်းမဲ့သည့် ‎လူဗာလသေခြင်းကဲ့သို့မည်၏။ အေမာမ်ခေါင်းဆောင်ကိုသိခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ ထံမှ အီမာန် ‎သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကိုလည်း အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ထံမှ ပြန်လည်လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ 
↑ سید مرتضی عسکری، ولایت علی در قرآن کریم و سنت پیامبر، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ هفتم
↑ محسن قرائتی، تفسیر نور، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، ۱۳۸۳ ش، چاپ يازدهم جلد ۷ُ صفحه ۳۱۸.
↑ صحیح بخاری، باب مناقب علی ابن ابی طالب، ج ۲ / ۲۰۰
↑ تاریخ ابن کثیر، ج ۵ ، ۲۱۳
↑ شواهد التنزیل، ج ۱ ، ۱۹۱
↑ تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ۲۰۹
↑ تاریخ ابن کثیر، مجمع الزوائد، مسند احمدبن حنبل، مسند احمد
↑ مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن ابن ماجه باب فضل علی، حاکم حسکانی، تاریخ ابن کثیر،
↑ مسند احمد، مجمع الزوائد، شواهدالتنزیل، تاریخ ابن کثیر،
↑ مرگ جاهلیت چیست؟
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အေမာမ်&oldid=720136" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။